Dadyoowga laga helo TBC-da oo dalka ku soo batay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Anders Tegnell, , caalin ku takhasusay cudurrada faafa oo ka howl-gala hayadda caafimaadka bulshada. Sawirle: Claudio Bresciani/TT.
Dadyoowga laga helo TBC-da oo dalka ku soo batay
La daabacay tisdag 1 mars 2016 kl 12.30
Dalka Sweden ayey waaayadan dambe aad kor ugu kaceeen dadyoowga laga helay cudurka qaaxada , middaasina oo la sheegay inay ugu waacan tahah qaxootiga faraha badan ee dalka soo galay.
Waxaa sidoo kale intaasi dheer iney cudurka u xanuunsadeen ama laga heley muwaadiniin badan oo iswiidhish ah oo dhowaanahan u xanuunsaday cudurka.
Mudddadii lagu guda jiray sannadkii ina dhaafay ee 2015 ayaa cudurka laga heley dadyoow gaarsii-san 835 oo hor leh, middaasina ay macnaheeedu tahay in tirada cudurka laga heley ey kor u kacday 20%, kolka loo barbar-dhigo sannadkii ka horeeyay ee 2014.
Anders Tegnell, ahna caalin ka howl-gala hayadda caafimaadka bulshada:
- Waa mid la hubo in kolka ey kor u kacaan tirada ajaaniibta dalka timaada sabab u noqoto iney kor u kacaan dadyoowga laga helo cudurka qaaxada ee waddammadoodii ku soo qaadey, hase yeeshee lagu ogaado kolka ey Sweden yimaadaan. Waxaa sidoo kale la hubaa inay sannadka soo socota tiradu kor u sii kici doonto. Hase yeeshee ay tirada kor u kaca ee 20% guud ahaan marka bulshada la eego ka dhigan tahay tiro aad u yar boqol illaa iyo 200 oo ruux.
Halka dhanka kale aanay jirin khatar sidaa u ballaaran in cudurka la qaado. Iyadoona 835 ruux ee lagu soo warramey in sannadkii hore cudurka qaaxada lahga heley ey 97 ruux un ku qaadeen dalka, halka intooda kale ey kala yimaadeen waddammadoodii.
Anders Tegnell iyo mar kale:
- May, haddii aad dalka muddo deggenayd waxaa aad u yar halista inaad cudurka qaaddo. Sweden-na waxay ka mid tahay waddammada caalamka ey ugu yar tahay halista inuu shakhsi ku qaado cudurka qaaxada.
Cudurka qaaxada (TBC) ayay sabab u noqotaa bakteeriya dhaawac u geeysata sambabbada, hase yeeshee aanay mar walba dhicin. TBC ayaa ka mid ah cudurrada hurgunka kuwooda ugu caan-san caalamka. Sannad walbana ey u xanuun-sadaan sagaal malyan oo ruux, halka ey laba malyan u geeriyoodaan.
Astaamaha lagu garto cudurka qaaxada ayaa ah qandho, habeenkii oo la dhidido, in la caatoobo iyo sidoo kale daal. Qaaxada sambabka waxaa kaloo lagu yaqaan qufac aan dhammaan muddo saddex toddobaad iyo wixii ka badan oo wata xaako ama xaako la'aan iyo caadiyan in dhiig la qufaco.
Cudurka qaaxada ayaa dalka Sweden aad looga heli jiray sannadihii afartameeyadii, hase yeeshee uu iminka yahay cudur aan caadiyan la arag.
684 qof oo Sweden ku nool oo laga helay cudurka qaaxada
Tirada dadyoowga qaba cudurka qaaxada oo aan sidaa isu bedelin
Hab cusub oo lagu daaweeyo qaaxada oo tijaabo lagu hayo